2021 MA Dual Plan (HMO SNP) - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Qorshayaasha Medicare Advantage Plans > Dhamaan Qorshayaasha Medicare ee 2021 > 2021 MA Qorshaha Labada ah (HMO SNP)
Adeegyo dheeri ah oo loogu talagalay xubnaha u-qalma ee Medicaid iyo xubnaha Medicare - oo aan kharash dheeraad ah ku bixin bishii.
Qorshaha MA Dual (HMO SNP) waxaa loogu talagalay inuu bixiyo taageero dheeri ah oo ku saabsan helitaanka daryeelka iyo ilaha kale.
Si aad xaq ugu yeelatid qorshahan, waa inaad uqalanto Qeybaha Medicare A iyo B iyo Macaashka Medicaid. La hadal khabiir si aad wax badan uga barato ama akhri boggayaga u-qalmitaanka.
Caafimaadka, Aragtida, Daawooyinka la qoro, Faa'iidooyinka-ka-iibsiga, Kaabista Gargaarka Maqalka, Gaadiidka, iyo Barnaamijka Jimicsiga.
Farmashiyaha Daawooyinka guud: $ 0 illaa $ 3.70
Daroogooyinka caanka ah: $ 0 illaa $ 9.20 Aan Daboolin
Hadafka Ururka 1 baaritaanka joogtada ah ee indhaha sanadkiiba, ilaa $ 400 2dii sanaba mar qalabkii aragga ee daawada Aan Daboolin
ilkaha $ 0 bixin, xaddid la'aan adeegyada kahortagga iyo ilaa $ 3,000 xadka faa'iidada dheeriga ah sanadkiiba Aan Daboolin
Aalada Maqalka sahasha 1 imtixaan maqal ah & 1 tijaabo ah oo qiimayn / qiimayn ah sanadkii iyo $ 1,700 loogu talagalay qalabka maqalka iyo qalabka sanad kasta Aan Daboolin
Gaadiidka 50 safar hal dhinac ah sanadkiiba si ballamo loo ansixiyo ballamo Aan Daboolin
Ka Badan Lacagta Ka-Talinta (OTC) $ 250 inaad ku qarashgareyso alaabada caafimaadka 3dii biloodba mar, ilaa $ 1,000 sannadkiiba Aan Daboolin
* Lacagta caymiska ee $ 36 waxaa bixiya Medicaid ama maxaa yeelay waxaad xaq u leedahay Caawinaad Dheeraad ah. Lacagtaada Medicare Qaybta B waa inay sii socotaa in la bixiyo, in kasta oo taa laga yaabo in lagu bixiyo kabitaanadan.
Buugyaraha oo kooban oo kooban ayaa ku siinaya adiga fikrad ah adeegyada aan bixinno iyo inta aad bixiso. Ma liis gareyso adeeg kasta oo aan daboolno ama liis garaynno xaddidaad kasta ama ka saaris. Dhagsii xiriiriyeyaasha hoose si aad u soo dejiso soo koobista faa'iidooyinka ee Ingiriisiga ama Isbaanishka.
Adams, Benton, Chelan, Clark, Cowlitz, Douglas, Franklin, Grant, King, Kitsap, Lewis, Okanogan, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston, Walla Walla, Whatcom iyo Yakima.
Baadh daawooyinka laguu qoro ee dawooyinka laguu qoro si aad u hubiso haddii daawooyinkaaga hadda jira uu daboolayo qorshaha. Raadi macluumaad ku saabsan xaddidaadda iyo xaddidnaanta daawooyinka qaarkood, iyo inta aad bixin doontid. Soo dejiso PDF ama ku raadi magacaaga dawooyinkaaga magaca ku qoran joornaalka internetka.
Soo Degso Ogaysiiska Sannadlaha ee 2021 ee Isbeddelka (Ingiriis)
➔ Soo Degso Ogaysiiska Sannadlaha ee 2021 ee Isbedelka (Isbaanish)
Soo Degso Ogaysiiska Sannadlaha ee 2021 ee Isbeddelka (Ruush)
Xubnaha qorshaha laba-geesoodka ah waxay leeyihiin $ 250 gunno ah oo ay ku qarashgareeyaan alaabada miiska laga soo iibsado 3dii bilood ee taariikheed. Waxyaabaha OTC waxaa ku jira qalab caafimaad oo waara, qalab caafimaad, iyo waxyaabo kale. Dalbo khadka tooska ah ama boostada oo alaabtaada u soo dir gurigaaga.
Wax badan oo ku saabsan OTC Catalog
Waxaan iskaashi la leenahay RoundTrip si aan u siino 50 safar hal-dhinac sanadkii ah si aan kaaga caawino waxtar caafimaad oo daboolaya. Gawaarida lagu rakibo kuraasta curyaamiinta iyo guryooyinka waa la heli karaa. Fadlan soo wac Adeegga macaamiisha inaad jadwal u sameyso raacitaankaaga ama macluumaad dheeri ah.
Waxbadan ka baro gaadiidka ballamaha caafimaadka
Dheeraynta Gargaarka Maqalka
Qalabka gargaarka dhegeysiga iyo agabyada la xiriira ee labada dhegood ayaa daboolan illaa a isku darka $ 1,700 sanad kasta. Sannad kasta, hal imtixaan maqal oo caadi ah iyo dheelitirida qalabka maqalka ayaa lagu darayaa.
Qorshaheenu wuxuu daboolayaa ilaa $ 3,000 sanad walba adeegyada ilkaha ee dheeraadka ah. Ma jiro wax xaddidan oo looga hortago adeegyada, sida nadaafadda, baaritaanka afka, iyo daaweynta foloraydhka. Ma jiro shabakad ilko oo xaddidan. Waad booqan kartaa dhakhtarka ilkaha aad jeceshahay waxayna kuu soo diri doonaan biilka CHPW.
Xubnaha qorshaha laba-geesoodka ah waxaa loo xilsaaray maareeye kiis kaas oo bixin doona taageero shaqsiyeed isla markaana ka caawin doona isku-dubaridka daryeelkaaga. Maareeyayaasha kiisku waxay la shaqeyn doonaan bixiyeyaasha si loo ogaado nooca daryeelka adiga kuugu habboon. Waxay kaa caawin karaan inaad sameyso ballamo oo ay kaa taageerto daaweynta. Maamulayaasha kiiska waxaa lagu heli karaa taleefan haddii aad wax su'aalo ah qabtid.
Waxbadan ka baro barnaamijkeena maaraynta kiisaska.
Diiwaanadayagu waxay ku ogeysiinayaan bixiyeyaasha daryeelka aasaasiga ah, bixiyeyaasha aragtida, takhasusleyaasha, xarumaha daryeelka, iyo farmasiyada kujira shabakadeena.
Adeegso qalabkeena Raadi Dhakhtar or ka daalaco hageyaasha bixiyahayaga si loo hubiyo cidda aaggaaga ka tirsan.